အီရတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်စစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်သူများနေထိုင်ရာ လေတပ်အခြေခံစိုက်စခန်းဝင်း အိမ်ရာ ဒုံးကျည် နှစ်စင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရ - Xinhua News Agency
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်မြို့၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က ဝန်ကြီးချုပ် Mustafa al-Kadhimi အားလုပ်ကြံရန် ကြံစည်မှုတစ်ခု မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးနောက် အစိမ်းရောင်ဇုံ၌ လုံခြုံရေးယူထားသော အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘဂ္ဂဒတ် ၊ မေ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အီရတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း အန်ဘာပြည်နယ်(Anbar) ရှိ အမေရိကန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ နေထိုင်ရာ အိမ်ရာဝင်းတည်ရှိသည့် လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်သည် ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် ကတ်ယုရှ (Katyusha) ဒုံးကျည် နှစ်စင်းဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်း အီရတ်စစ်တပ်က ဆိုသည်။
ဘဂ္ဂဒတ်မြို့တော်မှ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၀ ကီလိုမီတာအကွာခန့်၌ တည်ရှိသော al-Baghdadi မြို့အနီးရှိ Ayn al-Asad လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းထဲသို့ ဒုံးကျည် နှစ်စင်း ကျရောက်ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း ၊ သို့သော် လူသေဆုံးမှုမရှိကြောင်း အီရတ်ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ ပြန်ကြားရေးရုံးမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အီရတ်နိုင်ငံတွင် အမေရိကန်ဦးဆောင်သောညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ဆင်ရေးမှာ အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း အီရတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mustafa al-Kadhimi က ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သော်လည်းပဲ ထိုသို့ ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အန်ဘာစစ်ဆင်ရေးဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး Ahmed al-Dulaimi က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို့ပြောကြားရာတွင် လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှ ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာမှ နေ၍ ဒုံးကျည် နှစ်စင်းပစ်လွှတ်လာသည်ကို အီရတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်းဖြစ်စဉ်အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ယင်းစနေနေ့မှာပင် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် Trebil Border ဂိတ်အနီး အမြန်လမ်းပေါ်၌ လမ်းဘေးထောင်ထားသော ကားဗုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုတွင် အီရတ် စစ်သားတစ်ဦးသေဆုံးပြီး အခြား တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီးက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အရှေ့ပိုင်း Diyala ပြည်နယ်၌ ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီတွင် ကျေးရွာတစ်ရွာသည် မော်တာကျည်ဆံ ၆ လုံးထိမှန်ခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းဖြစ်စဉ်အတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး လူနေအိမ်အများအပြား နှင့် အရပ်သားမော်တော်ကားများ ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရကြောင်း Diyala စစ်ဆင်ရေးဌာနချုပ်မှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြင်းထန်သော စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွများအား နှိမ်နင်းရန် အီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ပြီးခဲ့သော လအနည်းငယ်အတွင်း လူအသေအပျောက်ရှိသည့် တိုက်ခိုက်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော်(အိုင်အက်စ်) စစ်သွေးကြွအုပ်စုကို အီရတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက နှိမ်နင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် အီရတ်နိုင်ငံ၌ လုံခြုံရေးအခြေအနေမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အိုင်အက်စ် စစ်သွေးကြွအကြွင်းအကျန်များသည် မြို့လယ်ခေါင်များ ၊ ကန္တာရများ နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြမ်းတမ်းသော နေရာဒေသများသို့ စိမ့်ဝင်သွားပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အရပ်သားများအား ခြုံခို ပြောက်ကျားတိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏဆိုသလို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
2 rockets hit air base housing U.S. experts in W. Iraq: military
BAGHDAD, April 30 (Xinhua) — Two Katyusha rockets hit an air base housing U.S. military experts and agencies in Iraq’s western province of Anbar on Saturday, the Iraqi military said.
The two rockets landed in the evening in the Ayn al-Asad AirBase near the town of al-Baghdadi, some 190 km northwest of the capital Baghdad, causing no casualties, the media office of the Iraqi Joint Operations Command said inastatement.
The rocket attack came, although Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi had confirmed on Dec. 29, 2021 the end of the combat mission of the U.S.-led coalition forces in the country.
In the eastern province of Diyala, six mortar rounds hitavillage at 8 p.m. local time (1700 GMT), woundingawoman and causing damage to several houses and civilian cars, according toastatement from Diyala Operations Command.
The security situation in Iraq has improved after Iraqi forces defeated the Islamic State (IS) militant group in 2017. However, IS remnants have since melted into urban centers, deserts and rugged areas, carrying out frequent guerilla attacks against security forces and civilians. Enditem
Photos – Members of the riot police stand in the vicinity of the Green Zone afterafailed attempt to assassinate Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi in Baghdad, Iraq, on Nov. 7, 2021.